भोक र गर्मीले एक बृद्धको मृत्यु , यस्तो अबस्थामा भेटियो – Sapana Sanjal
भोक र गर्मीले एक बृद्धको मृत्यु , यस्तो अबस्थामा भेटियो
June 9, 2021 128
Sapana Sanjal : देवदहमा एक पुरुषको शव फेला परेको छ । देवदह – खैरेनी चोक नजिकै करिब ५५ वर्षीय पुरुषको शव मंङ्गलवार बिहान फेला परेको हो । पातलो शरिर, कालो वर्णको, हलुका दाह्री पालेको, एक ब्यक्तिको शव भेटिएको तर तत्काल नामथर र ठेगाना नखुलेको प्रहरीले जनाएको छ। यद्यपि उनको बुटवल मजवार घर भएको शं`का गरिएको छ ।
त्यस्तै, देशका विभिन्न स्थानमा तीन जनाको शव भेटिएको छ । मृत अवस्थामा फेला परेकाहरुको शवको विषयमा प्रहरी थप अनुसन्धान अगाडि बढाएको जानकारी दिएको छ । कास्की जिल्लाको पोखरा महानगरपालिका–३० ढुङ्गेपाटनस्थित बञ्जारी चौतारा नजिकै कटेरोभित्र तनहुँ भानु नगरपालिका (३ बस्ने ३८ वर्षीय दिपक गुरुङ बुधबार दिउँसो मृत अवस्थामा फेला परेका छन् ।
यसैगरी, कास्कीकै माछापुच्छ्रे गाउँपालिका–६ गैह्रीगाँउस्थित बाटोमा सोही गाउँपालिका–५ धारापानी काउँरे घर भई हाल सोही नगरपालिका–१८ लामागाँउ बस्ने ६० वर्षीया दाउरी बिक बुधबार दिउँसो मृत अवस्थामा फेला परेका छन् । यता, पाल्पाको रिब्दिकोट गाउँपालिका–५ जैथुममा बस्ने ३६ वर्षीय सन्तोश कुमाल तानसेन नगरपालिका–६ गणेशधारास्थित हबी मियाको गरको भुई तल्लामा बुधबार राति मृत अवस्थामा फेला परेका छन् ।
Prevनिधारबाटै थाहा हुन्छ, तपाई बुद्धिमान की जिद्दि ?
Nextप्रमाणपत्र धितो राखेर रु २५ लाख ऋण दिने कार्यक्रम छिटो कार्यान्वयनमा जोड
सिन्धुलीमा मोटरसाइकल दु/र्घटना हुँदा एक प्रहरीसहित तीन जनाको मृ/त्यु !
पितृ शोक परेर भाव्विहल अधिकारीलाई नीताले यसरी सम्हालिन, छोडिन्न एक छिन पनि उनको हात, हेर्नुहोस देखियो यस्तो कारुणिक दृश्य (भिडियो सहति)-
अभिनेत्री तथा मोडल रक्षा श्रेष्ठ आमा बन्दै : जिग्री भन्छन यस्तो बेला हास्ने की रुने !
नेपालमा पनि सुरु भयो शक्तिशाली चक्रवातको प्रभाव, मौसमविद् भन्छन् सजग रहनुहोला